Isola itulo imenenja kamasipala eshiswe nge-ayina ihlaselwa
IMENENJA yeTheku esamisiwe uMnuz Sipho Nzuza usale unje umkhaba wakhe ngemuva kokushiswa nge-ayina esiswini. Isithombe: IOL
Intatheli Yesolezwe | May 13, 2021
IYELULAMA esibhedlela imenenja yeTheku esamisiwe emsebenzini uMnuz Sipho Nzuza kulandela ukushiswa nge-ayina esiswini ehlaselwa amadoda awasola ngokuba yizinkabi.
Engxoxweni ne-Daily News enguzakwabo weSolezwe kuleli sonto uNzuza uthe usola ukuthi uqashelwe izinkabi ukuthi zimhlasele, nosekumenza asabele impilo yakhe neyomndeni wakhe.
Kuvela lolu daba nje emasontweni edlule kuke kwasabalala i-video okusolakala ukuthi iveza uNzuza ngemuva kokubanjwa oqotsheni ezitika ngocansi nonkosikazi womuntu. Ephawula ngezigameko ezimehlele muva nje, uNzuza uthe uyasola ukuthi kwakhiwe itulo lokuthi kuthunazwe isithunzi sakhe.
“Bayihlele kahle yonke lento. Konke osekuvele ezinkundleni zokuxhumana kungamanga. Bahlose ukungenza ngibukeke njengomuntu omubi,” kuchaza uNzuza.
Ngenxa yalokhu kuhlaselwa, uNzuza ongomunye wabasolwa ecaleni lethenda yezigidi zamarandi yokuqoqwa kukadoti kulo masipala, uthe akasazizwa ephephile benomndeni wakhe. Uthe uyasola ukuthi abantu abamhlaselayo abeneme ngomsebenzi omuhle asewenzele leli dolobha.
Ngesonto eledlule Isolezwe labika ngokusabalala kwe-video eyaqoshwa kulandela ukubanjwa kowesilisa okusolwa ukuthi nguNzuza ezitika ngocansi nonkosikazi womuntu. Kusabalale nezithombe zakhe ezinkundleni zokuxhumana enqunu.
UNzuza unqabile ukuphumela obala ngokuthi uhlaselwe ekuphi nendawo muva nje jodwa wathi lokhu uzokuveza uma esebize isithangami nabezindaba maduze. Uthe icala akalivulanga emaphoyiseni ngoba uyawasaba amadoda abemhlasele.
Ugwetshwe izinyanga ezine odedele ulabhabha wempama kumengameli waseFrance
Udlokodle inkomo yentombi ngesikhuni sivutha
Unqunyelwe ugwayi katiki uZahara
Uyabhoboka ngokuzama ukuzibulala izikhawu ezintathu
Akalahlekile owesifazane ozale izingane ezingu-10: umnyango